पुँजी बजारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता बढाइदै « लुम्बिनी सञ्चार
पुँजी बजारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता बढाइदै
प्रकाशित मिति : 18 April, 2021 1:58 pm
काठमाडौं । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु कतिले नेपालमा पुँजी बजारमा लगानी गर्ने गरेका होलान् ? त्यसमाथि पनि दृष्टिविहीन भएकाहरु कति होलान् ?
अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु १५ सयभन्दा बढीले साधारण सेयर (आईपीओ)मा लगानी गर्ने गरेका छन् । दृष्टिविहीनहरूलाई बैंक खाता खोल्नेदेखि नै समस्या भए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पुँजी बजारमा आकर्षण बढ्दो छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि अपायक, पहुँचविहीन बैंकका शाखाहरू, असहयोगी कर्मचारी, दृष्टिविहीनहरूका लागि बैंक खाता खोल्नका लागि हस्ताक्षर, साक्षी, बैंकको सेवा, चेकको समस्या, पहुँचविहीन एटीएमलगायतका समस्या छन् ।
समस्याकै बाबजुद रुपन्देहीका दृष्टिविहीन मुकुन्द चालिसेले विगत १० वर्षदेखि पुँजी बजारमा लगानी गर्दै आएका छन् । चालिसे नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघ रुपन्देहीका संयोजक पनि हुन् । उनलाई बैंक खाता खोल्न सुरुमै समस्या परेको उनले सुनाए ।
दृष्टिविहिन भएकोले गर्दा उनले चेकको समस्या, एटीएमको समस्या, बैंकमा खाता खोल्न साक्षी लैजानु पर्नेदेखिको समस्या छ । कसैलाई चेक दिएर पैसा निकाल्न पनि औंठाछाप पनि नचल्ने उनी बताउँछन् ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पुँजी बजारमा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले समृद्ध नेपाल लगानी समूहले आयोजना गरेको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा उनले दृष्टिविहीनहरूलाई भएको समस्या बताएका थिए । एक दशकअघि पुँजी बजारमा लगानी सुरु गर्दा विभिन्न समस्या हुँदा पनि उनी हिम्मत कसेरै पुँजी बजारमा होमिएका हुन् ।
चालिसेले कुनै पनि नीति–नियम बनाउँदा दृष्टिविहिन अपाङ्गता भएकालाई सम्झन आग्रह गरेका छन् । प्रविधिमा पनि कसरी पहुँच पु¥याउन सकिन्छ सबैको ध्यान जानुपर्ने उनको आग्रह छ ।
चालिसेले भने, “अहिले भएका विभिन्न सफट्वेयरले युनिर्भसल अक्षरमात्र थाहा हुने अवस्था छ, फोटो, ग्राफिकलगायतका अरु अक्षर प्रविधिले लिन नसक्ने भएकाले त्यसकारण अब पहुँच बढाउनका लागि एप्लिकेसन वा सफ्टवेयर बनाउनु पर्छ ।”
सेयर कारोबारको लागि प्रविधि बनाउँदा युनिर्भसल भाषा राखेर प्रविधि बनाउन उनले आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक केदार न्यौपानेले राष्ट्र बैंकले साङ्ग र अपाङ्गता भएका व्यक्तिबीच भेदभाव हुनेगरी कुनै पनि नीतिनियम नरहेको बताए ।
उनले अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अरु व्यक्तिलाई सबैलाई एउटै नियम भए पनि बैंकहरुले गरेको भेदभावको विषयमा बैंकर्स संघसँग कुरा गर्ने बताएका छन् ।
“यदि कुनै बैंकले सहज ढंगले काम नगरिदिए राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिनुहोस्”, न्यौपानेले भने,“हामी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ । ”
सुरुमा सेयर अनलाइनमा ल्याउँदा साङ्ग लगानीकर्ताले दुःख दिएको तर अहिले सबै खुशी रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जका महाप्रबन्धक चन्द्रसिंह साउदले बताए । जसरी हिजोको दिन साङ्ग व्यक्ति खुसी थिएनन्, आज अपाङ्गता भएका व्यक्ति त्यस अवस्थामा रहेको उनको दाबी थियो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई पुँजी बजारमा पर्याप्त सुविधा नभएको स्वीकार्दै उनले अब प्रविधि बनाउँदा अपाङ्गमैत्री बनाउने बाचा गरे ।
“ब्रोकरलाई एप्लिकेसन ल्याउनुस भनेका छौं ब्रोकरले नल्याए पनि स्टक एक्सचेन्जले एप्लिकेसन ल्याउने छ,” उनले भने, “अहिले ब्रोकरले ल्याउने भनेको प्रणाली टीएमएस नभएर अर्डर म्यानेजमेन्ट सिस्टममात्रै हो, अब धितोपत्र बोर्डले नै बजारमा एकीकृत प्रणाली ल्याउनुपर्छ, आगामी दिनमा मोबाइल एपबाटै सेयर कारोबार गर्ने सुविधा लगानीकर्तालाई दिइनुपर्छ ।”
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मासँग पुँजी बजारको पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल भएको बताए । त्यसमा पनि यसमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिपनि हुनुहुन्छ भन्दा कसरी अगाडी बढाउन सकिन्छ के गर्न सकिन्छ भनेर चासो राखेको सुनाए ।